​विवादका बीच समितिद्धारा तत्काल ग्यास बुलेट खरिद गर्न निर्देशन
काठमाडौ । ग्यास बुलेट खरिदको सम्बन्धमा निकै बिबाद भईरहेको बेला व्यवस्थापिका संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्त हित सम्बन्ध समितिले ग्यास बुलेट खरिद गर्न निर्देशन दिएको छ । आपूर्ति मन्त्रालयले खारेज गरेको..
​पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र एलपी ग्यासको मूल्य घट्यो
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले साढे ६ महिनापछि पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र एलपी ग्यासको मूल्य घटाएको छ। आयल निगमका प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेका अनुसार पेट्रोल, डिजल र मट्टितेल सबैमा प्रतिलटर २ रुपैयाँ..
२ लाख प्याकेट अखाद्य फ्रुटी ब्राण्डको जुस नष्ट
काठमाडौं । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले २ लाख प्याकेट दुगड फुड एण्ड वेभरेज प्रालिको फ्रुटी नष्ट गरेको छ । फ्रुटीलाई गोदाम परिसरमा गाडीले कुल्चिएर नष्ट गरिएको हो..
विद्युतको स्युचाटार सवस्टेशनमा आगलागी, देशभर विद्युत अवरुद्ध
काठमाडौं । काठमाडौंको स्युचाटारस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सवस्टेशनमा सोमबार दिउँसो भीषण आगलागी भएको छ । दिउँसो अचानक सुरु भएको आगलागीबाट देशभरको विद्युत प्रसारण अवरुद्ध हुन पुगेको छ । यो सवस्टेशनमा आगलागी..
प्रेम सम्बन्धको कारण सुशान्तले मृत्युको बाटो रोजे
काठमाडौं । परिवारको एक्लो छोरो थिए सुशान्त श्रेष्ठ । बाबु सामान्य व्यापारी, आमा निजी अस्पतालको कर्मचारी । आम्दानी राम्रै थियो । छोरालाई आँखाको नानीमा राखेर हुर्काए दम्पतीले । सँगसँगै हुर्कदैं थियो..
भारतको बिजुली काठमाडौं ल्याउनै समस्या
काठमाडौं । पाँच महिनाअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतको नयाँ दिल्लीमा स्वीच थिचेर ८० मेगावाटको विद्युत आयातको शुभारम्भ गरे । ढल्केबर–मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत नेपाल ल्याइने..
​‘आऔं सबै मिलि देश बनाऔं’ अभियान सार्वजनिक
काठमाडौं । जगदम्बा सिमेन्टले ‘आऔं सबै मिलि देश बनाऔ’ भन्ने अभियान सार्वजनिक गरेको छ । नेपालको समग्र विकास स्वयम् नेपालीहरूकै प्रयासबाट मात्र सम्भव छ’ भन्ने सन्देशका साथ आम नेपालीलाई एकजुट..
​अब विदेशी च्यानलले विज्ञापनरहित सामाग्री मात्र प्रसारण गर्न पाउने
काठमाडौं । नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानलहरुले अब विज्ञापनरहित सामाग्री मात्र प्रसारण गर्न पाउने भएका छन् । मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले विदेशी टेलिभिजनमा क्लिन फिड नीति लागू गर्ने प्रस्तावसहितको आम..
एकै पटक ६ सय ग्यास बुलेट खरिद गर्न ग्यास उद्योगलार्इ अनुमति
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघलाई ६ सय ग्यास बुलेट खरिद गर्न अनुमति दिएको छ । संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले ४० वटा ग्यास उद्योगीले निगमबाट ६ सय..
रत्नपार्कले ८५ लाखभन्दा बढी कमायो, अब खाजाघर पनि
काठमाडौँ । गत आवमा रत्नपार्कको आम्दानी ८५ लाख २१ हजार ६ सय ६७ भएको छ। केही समय बन्द उक्त उद्यान अघिल्लो आवको असार महिनादेखि केही थप व्यवस्थापनका साथ सर्वसाधारणका लागि खुला..
आठ कम्पनीलाई पेट्रोलियम कारोबारको लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न अनुमति
काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थ आयात र बिक्रीवितरणमा नेपाल आयल निगमको एकाधिकार तोड्दै सरकारले आठ वटा नयाँ कम्पनीलाई पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउनका लागि पूर्वाधार निर्माणको अनुमति दिएको छ । आपूर्ति मन्त्रालयले मालिका, नेसनल..
​आइतबारदेखि ग्यासका सिलिन्डर निःशुल्क साटिँदै
काठमाडौं । तपाईंसँग भएको कुनै कम्पनीको ग्यास सिलिन्डर साट्न नमिलेर हैरान हुनुभएको छ ? कि तपाईं बस्ने क्षेत्रमा सजिलै नपाइने ग्यास सिलिन्डर नाकाबन्दीका बेलामा लिएर अहिले त्यतिकै थन्किएको छ ?..
फेरि फैलिदै नेटवर्किङ व्यवसायको अबैध धन्दा
काठमाडौं । गोल्डक्वेष्ट नामक कम्पनीबाट नेपालमा सुरु भएको नेटवर्किङ व्यवसायको अवैध धन्दा हर्बो र यूनिटी इन्टरनेशनलसम्म पुग्दा लाखौं नेपाली ठगिए । यूनिटीका संचालकहरुलाई जेल हालेपछि नेटवर्किङ बन्द भयो । तर फेरि..
​जेएमई र मलेसियाको ट्रयाङ्लोेबीच रेमिट्यान्स सम्झौता
काठमाडौं । जेएमई रेमिट प्रालि र मलेसियाको ट्रयाङ्लोे एसबीएन बिएसडीबिच रेमिट्यान्स भुक्तानी सम्झौता भएको छ । जापान लगायतका अन्य मुलुकबाट रेमिट्यान्स भित्राईरहेको जेएमईले आफ्नो सञ्जाल बढाउने क्रममा ट्रयाङ्लोेसँग रेमिट्यान्स् भुक्तानी..
काठमाडौंमै १० रूपैयाँमा सर्ट बेचिँदै
काठमाडौं । तपाईंलाई सुन्दा अचम्म लाग्ला, एकमुठा सागभन्दा कपडा सस्तो हुन्छ भनेर । तर सामाखुसी टाउनप्लानिङमा रहेको एक पसलमा सागभन्दा कपडा सस्तोमा पाइन्छ । अहिले बजारमा एकमुठा सागको २० रूपैयाँ पर्छ..
किन बढ्यो ? ​वेलायतमा चुनाव हुँदा नेपालमा सुनको भाउ एकै दिन तोलामा ३ हजारले
काठमाडौं । अघिल्लो दिनसम्म सामान्य घटबढ भइरहेको सुनको मूल्यमा शुक्रबार एक्कासी भारी बृद्धि भएको छ। यूरोपियन युनियनबाट बेलायत बाहिरिने पक्कापक्की भएपछि सुनको मूल्यमा भारी बृद्धि भएको हो। बिहिबार प्रतितोला ५६ हजार रुपैयाँमा..
काठमाडौं । दुई देशबीच चर्चामा रहेको पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको काम अगाडि बढाउन भारतीय प्रतिनिधि नेपालमा आएका छन् । लामो समयदेखि रोकिएको पाइपलाइन निर्माणको कामलाई सुचारु गर्नका लागि भारतीय प्रतिनिधि नेपालमा आएका..
​यती एयरलाइन्सद्धारा चार सामाजिक संस्थालाई १२ लाख सहयोग
काठमाडौं। निजी क्षेत्रको वायुसेवा कम्पनी यती एयरलाइन्सले चारवटा सामाजिक संस्थालाई आर्थिक सहयोग गरेको छ । सामाजिक उत्तरदायित्व अन्र्तगत यतीले चार संस्थालाई प्रति संस्था ३ लाख ६ हजार २३ रुपैंयाका दरले..
उपभोक्ता ठग्ने नौ सय व्यापारी कारबाहीमा
जनकपुर । गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय जनकपुरले कम तौल गरी उपभोत्ता ठग्ने ९०२ जना व्यापारीलाई कारबाही गरी करिब १४ लाख जरिवानाबापतको रकम असुल गरेको छ । धनुषा, महोत्तरी, सिन्धुली, सर्लाही र..
​एसियन विस्कुट एण्ड कन्फेक्सनरीको ‘ग्लो पप’ बिक्रिमा प्रतिबन्ध
काठमाडौं । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले एसियन विस्कुट एण्ड कन्फेक्सनरीको उत्पादन ‘ग्लो पप’ ललिपपको उत्पादन तथा बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । उक्त ललिपपको नलीभित्र चम्कने अज्ञात रसायन पाइएको..
एक्काइसौं शताब्दीमा पनि वर्गीय विभेद : लेखापरीक्षकप्रतिको विभेद अन्त्य हुनुपर्ने माग
काठमाडौं । लेखापरीक्षक व्यवसायीहरूले सबै विभेद अन्त्य हुनुपर्ने माग गरेका छन् । लेखापरीक्षकहरूको तीनदिने क्षेत्रीय स्तरको अनवरण कार्यक्रमको उद्घाटनका क्रममा शुक्रबार वीरगन्जमा सहभागी लेखा व्यवसायीहरूले यस्तो आवश्यकता औंल्याएका हुन् । नेपाल..
कांग्रेसभित्र बबन्डर : पार्टी सभापतिले नै रामशरणजस्तो व्यक्ति भनेपछि................
काठमाडौं । सरकारले भूकम्प पीडितलाई प्रभावकारी रुपमा राहत नदिएको भन्दै आलोचना भइरहेको भएपनि सोही विषयलाई लिएर काँग्रेसभित्र समेत बबन्डर मच्चिएको छ । भूकम्प प्रभावित जिल्लाका पार्टी सभापति र सांसदसँग छलफल गर्ने..
काठमाडौं । सरकारले एचपी ग्यासको खरिद ढुवानीमा आदेश (पीडिओ) रोक्का गर्ने निर्णय गरेपछि व्यवसायी आन्दोलित भएका छन् । उनीहरुले निर्णय नसच्याए ५ दिनपछि सम्पूर्ण उद्योग बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्..
ग्यास पड्किएर ३ जनाको मृत्यु भएपछि एचपी ग्यास बन्द
काठमाडौं । सरकारले एचपी ब्रान्डको ग्यास आयात रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ । एचपी ग्यास विस्फोट भएर ३ जनाको मृत्यु भएपछि सरकारले यस उद्योगको कारोबार तत्कालका लागि प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय..
रेमिट्यान्समा ह्रास: आर्थिक वृद्धिमा चिन्ता, मुल्यबृद्धि ९ प्रतिशत पुग्ने - विश्व बैंक
काठमाडौँ । विश्व बैंकले भूकम्पपछि अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा भएको अवरोधले थलिएको नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स आयमा आएको ह्रासले आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर पार्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ । विश्व बैंक समूहले आज..
​रसुवामा सुख्खा बन्दरगाह बनाउने गृहकार्य तीव्र, जग्गा अधिकरण सम्पन्न
रसुवा । सुक्खा बन्दरदगाह बनाउन पहिलो चरणको गृहकार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक केसीका अनुसार सुख्खा बन्दरगाह बनाउन टिमुरे गाविस इलाकाको जग्गा अधिकरण गर्ने कार्य..
​सहकारीमा साढे ४५ लाख सदस्य पुग्यो, दशौँ लाख युवाका लागि रोजगारीको स्रोत
गौतमबुद्ध बज्राचार्य काठमाडौँ । विसं २०१३ मा नेपालमा सहकारीको प्रादुर्भाव भएदेखि हाल आएर केही कमीकमजोरीका बाबजुद सहकारी व्यवसाय दशौँ लाख युवाका लागि रोजगारीको स्रोतका रुपमा विकास भएको छ । तर सङ्ख्यात्मकरुपमा सहकारी..
​गभर्नर डा चिरन्जीवी नेपालको हस्ताक्षर रहेको पहिलो नोट बजारमा आयो, कस्तो छ त नयाँ नोट ?
काठमाडौँ । एक सयको नोट नेपालमा सुरु भएको बेलादेखि नै त्यसको पछाडिको भागमा एउटा गैँडा रहने गरेकोमा आजदेखि बजारमा आएको नयाँ नोटमा दुई वटा गैँडा हुनेछ। नेपाल राष्ट्र बैँकले आज सार्वजनिक..
क्यासिनो व्यवसायी आफ्नै अडानमा उठेन सरकारको एक अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ
सिबी अधिकारी काठमाडौँ । क्यासिनो पर्यटनको एउटा दरिलो आधार भए पनि यसको नियमन र व्यवस्थापन अभावले विवादित बन्ने गरेको छ। क्यासिनो सम्बन्धी सरकारी नीतिको अभाव र सञ्चालकको लापर्बाहीले पर्यटकीय खुराक क्यासिनोले फड्को..
साल्टट्रेडिङको साधारण सभाले १०% नगद र १५% बोनस शेयर दिने निर्णय, अब पट्रोल पनि संचालन गर्ने
काठमाडौं । नुन, चिनी, खाना पकाउने ग्यास, खाद्यन्न (चामल र दाल) तथा रासायनिक मलको कारोबार गर्दै आएको साल्टट्रेडिङ कर्पोरेशनले अब पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार समेत गर्ने भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ कारोबारका..
Results 889: You are at page 13 of 30